Big City Small World (Series2Episode 1 - Fingers Crossed) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on November 20, 2012 at 11:34 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode 1 - Fingers Crossed ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Series2Episode 1 - Fingers Crossed (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၁) – လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ် ထပ်ထားပါ။)
မိတ်ဆွေဟောင်းများဟာ Tony ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ သတင်းကောင်းကို မျှဝေခံစားကြရန်အတွက် စုဝေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ကော်ဖီဆိုင်သည်လည်း မကြာမီ ပိတ်ကောင်းပိတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟေး! ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်!
ဟေး! နင့်လည်း တူတူပါပဲ!
ဟယ်လို Sarah! ဟိုင်း Magda…
နေကောင်းလား Olivia? Harry!
ကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ် ကျေးဇူးပါပဲ၊ အားလုံးကောင်းတယ်၊ Tony ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဘက်ကို ကော်ဖီလေး ချပေးပါလား?
ကောင်းပါပြီ၊ … ခဏစောင့်ပါဦး… ငါလည်းဒီမှာ အလုပ်အရမ်းများနေတယ်…
တကယ်တော့ သူကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ပုံစံကိုက အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါ...
ဒါဆိုရင်တော့ နင့်ကို ငါယုံလိုက်မယ်... သူ့ကော်ဖီကတော့ အမြဲကောင်းနေတာပဲ!
အဲဒီတော့ နင်တို့နှစ်ယောက်ရော အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?
ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါတို့နှစ်ယောက်က တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ တိုက်ခန်းရထားတာ…
ငါတို့က Harry ရဲ့ အရင်နေရာကို ပြောင်းလိုက်တာလေ...
အင်း၊ ငါမှတ်မိတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? ပြဿနာမရှိဘူးမဟုတ်လား? အခုထိ သူငယ်ချင်းတွေပဲ မဟုတ်လား? တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ အတူနေရတယ်ဆိုတာ မလွယ်လှဘူး…
ဟင့်အင်း၊ ဟင့်အင်း၊ ပြဿနာမရှိပါဘူး...
သွားတိုက်ဆေးဗူးကို သူအဖုံးပြန်မပိတ်တာက လွဲလို့ပေါ့...
...ပြီးတော့ သူကတော့ ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို အချိန်အကြာကြီးကြည့်တယ်လေ
မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်ပါ၊ ငါတို့ အဆင်ပြေကြပါတယ်
တစ်ခုတည်းသော ပြဿနာက အခန်းငှားခပဲ...
ကျွန်မအနေနဲ့ သင့်တော်တဲ့အလုပ်ကောင်းတစ်ခု ရှာတွေ့သင့်ပြီ။ အဲဒါကလဲ လိုအပ်တဲ့ ဘွဲ့ရလဒ်ရထားဖို့လိုနေတယ်...
ဟုတ်သားပဲ။ နင်ပြောခဲ့တာကို မှတ်မိတယ်။ ဘယ်တော့ အဖြေသိရမလဲ?
ဒါဆိုရင် လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ထပ်လိုက်!
ထပ်လိုက်တာလေ။ တစ်ခုခု ကံကောင်းတာဖြစ်စေချင်ရင် ငါတို့ အမြဲပြောတာလေ
အို၊ ကောင်းပြီလေ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ထပ်လိုက်!
တစ်ယောက်ယောက်များ Johnny အကြောင်းကြားကြသေးလားဟင်? Sarah?
ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးက တရုတ်လူမျိုးဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ အချိန်တိုင်း အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ဘူးနော် နင်သိလား! တရုတ်ပြည်မှာ လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟ (ရယ်လျက်)
သူက နင်နဲ့ ပိုခင်တာမဟုတ်ဘူးလား Harry?
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါ။ သူ့နဲ့ တစ်ချိန်လုံး အဆက်အသွယ်ရှိတယ်
သူက အခုထိ Chongqing မှာ သူ့အလုပ်သစ်နဲပဲ။ သူကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖိ်ု့ကောင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ် ဒါပေမယ့် သူက ငါတို့ကိုလွမ်းနေတာ – ပြီးတော့ လန်ဒန်ကို ပြန်လာချင်နေတာ!
လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ထပ်လိုက်!
ပြီးတော့တာ့ နင်ရော ဘယ်လိုလဲ Harry? နင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ? အလုပ်ရှာနေတုန်းပဲလား?
ဟုတ်တယ်လေ၊ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ ငါအလုပ်သစ်ရှာနေတုန်းပဲ
ငါဘာမှတော့ မတွေ့သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေတွေတော့ ငါ့မှာ ရှိပါတယ်။ စစချင်းတော့ အလုပ်မလုပ်ရတာကို တစ်ကယ် သဘောကျတယ်၊ အားလပ်ချိန်တွေကို နှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ – အင်း ငါပိုက်ဆံလိုလာပြီလေ ပြီးတော့ – အင်း အချိန်တိုင်းဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့ ပျင်းနေတာပေါ့။
Fadi ဘယ်ရောက်နေလဲ? Olivia? ငါသူ့ကို မတွေ့တာ ကြာလှပြီ
ငါထင်တာက နင်သိမယ်ထင်လို့ပါ…နင်သိပါတယ်. နင်တို့က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးလား?
ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလေ။ ဒီထက်မပိုဘူး။
ငါလဲ တစ်ခြားဟာကို မဆိုလိုပါဘူး! (ရယ်လျက်)
ငါလည်း မထင်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကအခုတော့မရှိဘူး။ သူ့မိသားစုဆီကို သွားလည်တယ်။ နောက်တစ်ပါတ်မှ ပြန်ရောက်လိမ့်မယ်
ဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကော်ဖီလေးခွက်...
ပျော်ပျော်နေပါ Tony ရဲ့
ပိုဆိုးကို ဆိုးလာနိုင်တာ! ဒီဆိုင်က မကြာခင်ပိတ်တော့မှာ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်း သွားဖို့ တစ်နေရာရာ ထပ်ရှာရလိမ့်မယ်
မြေယာအဆောက်အဦကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပေါ့ – သူတို့က ဒီနောက်နားလေးမှာတင် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းတွေဆောက်မလို့။ ဒီအဆောက်အဦးဟောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ချင်နေတာ
ဆိုးတာပေါ့! ငါဒီမှာလုပ်လာတာ ကြာလှပြီ။ ငါဆိုလိုချင်တာက သူတို့က ငါ့ကို နစ်နာကြေးပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါကတော့ ဒီမှာပဲဆက်နေချင်တာ
မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါအခုမှသတိရတယ်... ငါ့ဆိုင်လဲပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့...
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နင့်ဆိုင်က ဘေးချင်းကပ်ရပ်ပဲဟာ...
ငါ့ဆိုင်ကို ဖြိုချလို့ဘယ်ရမလဲ! ငါတို့ တစ်ခုခု လုပ်မှဖြစ်မယ်…
Permalink Reply by UMyo Min on November 20, 2012 at 18:18
Permalink Reply by Thike Htun on November 20, 2012 at 21:22
Thank for sending this lesson.
Permalink Reply by aunghtedmyat on November 21, 2012 at 8:54
Permalink Reply by ikee on November 21, 2012 at 11:08
Thanks you so much for this lesson